China Hot isina kuremerwa inokurumidza madziro yakakwira simba reUS wall adapter 65W Kugadzira uye Fekitori | Staba Electric
*Wall Multi Usb Charge 65W Tsananguro Yemashoko
Tekinoroji iri kushanduka mumaindasitiri ese kubva kumotokari kusvika pakukurukurirana uye ikozvino kusvika pamaitiro atinochaja malaptop edu, mapiritsi, uye mafoni. Hauchadi kutakura machaja akasiyana nekutenda kumaGaN USB C PD majaja.
Rudzi urwu rune simba rayo rese rakaburitswa pa65W iyo inobhadharisa laptop yako mukati memaawa maviri. Iyo inowiriranawo nemalaptop ane chiyero chepasi kana kupfuura 65W. Kuuya ne USB ports, inobvumidza iwe kubhadharisa zvishandiso zvako panguva imwe chete. Simba rekuchengetera rinovimbisa kuti zvese zvishandiso zvinobhadhariswa zvakanaka. Inoenderana neMacBook, mafoni, mapiritsi, uye mamwe madivhidhi e USB. Inotungamirwa naGaN tech, inojaja iri 30% diki pane mamwe majaja, akaomesesa kuperekedza iwe kwese kwaunoenda. Iyi compact 65W PD charger ine USB-simba kuendesa zvinoreva kukurumidza kuchaja kune ako USB-PD-inogoneswa michina.
Iyo diki uye diki dhizaini inogona kukwana muhomwe yako kuti iwe ugone kuitakura iko kwaunoenda. Kureruka kwayo kunobvisawo hupenyu hwebhatiri. (Inoenderana nezvose zviri zviviri PD & QC kuchaja). Premium uye Inotakurika - Iwo madoko akaedzwa kuti amire pamusoro pezviuru zvezviuru zvinoshandiswa uye charger yakagadziridzwa kuti irambe ichiramba ichiroja kwemaashoma e10,000 maawa, ichikupa iwe mhando yaunogona kuvimba nayo. Pd GaN USB charger ine Akangwara emagetsi kugovera, ichiwedzera kushanda kwekushanda kweimwe chete kana akawanda madivayiri. Iyo yakagadzirirwa kushanda neyechizvino chizvarwa chemakomputa uye smart zvishandiso, zvichibvumidza kuti ichinjwe zvekare plug kutungamira uye nekukurumidza kuchaja. yakawedzera hombe. Nayo, iwe unowana kutonhorera kushanda uye kwepamusoro-kugona kuchaja.
*Multi Usb Chaja 65W Paramu
Superior Chengetedzo Yekukurumidza Charge Pd
Inopindirana Flexible Type C Pd Charger
Akangwara Simba Kugovera Wall Multi Usb Charge
Nouchenjeri inogovera 65W yesimba pakati pemidziyo miviri painobhadharisa panguva imwe chete uye inotsigira kumhanya-mhanya kuchaja kusvika ku65W kana chishandiso chimwe chakabatana, smart charger charger
Pashure: Yakakurumbira yekufambisa yakakwira simba 65W mhando c pd usb charger PD65W
Zvadaro: Hunhu hwese usb inokurumidza kuchaja madziro smart usb charger PD30W